China Plastic ekubhalwe formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
I-Lianggong Plastic Slab Formwork yinkqubo entsha yefomathi yezinto ezenziwe kwi-ABS nakwiglasi yefayibha. Inika iisayithi zeprojekthi ngolwakhiwo olulula kunye neepaneli zobunzima bokukhanya ke kulula kakhulu ukuziphatha. Ikonga iindleko zakho xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo zefomwork.
Iifomathi zeplastikhi zikulungele ukuqonda iikholamu zekhonkrithi, iintsika, iindonga, iiplinths, kunye neziseko ngokuthe ngqo. Ukungenelela kunye neenkqubo zeemodyuli zokubuyisela ukusetyenziswa kweeplastiki zisetyenziselwa ukwakha izinto eziguqukayo, kodwa zilula, izakhiwo zekhonkrithi. Iiphaneli zilula kwaye zomelele kakhulu. Zilungele ngokukodwa iiprojekthi zolwakhiwo ezifanayo kunye nexabiso eliphantsi, izikimu zezindlu ezimbaxa. Iimodyuli zazo ziyanelisa lonke ulwakhiwo kunye neemfuno zocwangciso: iikholamu kunye neentsika zeemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, iindonga kunye neziseko zobukhulu obahlukeneyo nokuphakama.
Iiplastikhi zefomathi zilula kakhulu xa kuthelekiswa neepaneli zemithi zemveli. Ngapha koko, izinto zeplastiki ezenziwe ngazo zivumela ikhonkrithi ukuba ingabambeki: yonke into inokucocwa ngokulula ngamanzi amancinci.
1. Iimodyuli eziguquguqukayo kwisiza.
2. Izibambo ezinelungelo elilodwa lomenzi kwinayiloni yokutshixa ngokugqwesileyo kweepaneli.
3. Ukudiliza ngokulula kunye nokucoca ngokukhawuleza ngamanzi.
4. Ukuxhathisa okuphezulu (60 kn / m2) kunye nobude beepaneli.
Ukusika ngokukhululekileyo kwaye kulungiswe ngamandla amakhulu okubamba izikhonkwane.Yenziwe ngokwezifiso ngokusekwe kubukhulu, ubukhulu, kunye nepropathi ethile.Yenziwe ngokwezifiso kwimilo, enjengokusonga, ukugoba.
Ukuhamba ngokulula njengokuxinana kuncitshiswe ngama-50% ngokuthelekisa ifomwork yomthi.
Umhlaba odibeneyo wokungena manzi uyiphepha ngokugqibeleleyo imiba ebangelwa okusingqongileyo okufumileyo, njengokunyuka kobunzima, ukujija, ukumisa umhlwa, njalo njalo.
Ingeniso ifike kumaxesha angama-X ngokuthelekisa uninzi lweefomathi zeplastiki, ezinokumelana nobushushu obuphezulu kunye nepropathi ebalaseleyo yomatshini.
Ikhuselekile kwaye inobuhlobo kwindalo, inkqubo yeplastikhi iyahlangabezana nemigangatho yamanye amazwe.
Isamente indawo enganyangekiyo kulula ukuyicoca.Umbonakalo wodonga olomileyo ngomhlaba ogudileyo kunye nokujonga okuhle
Ukuvavanya Icandelo Idatha Umgangatho
Ukufunxwa kwamanzi % 0.009 JG / T 418
Unxweme lobunzima H 77 JG / T 418
Impembelelo yamandla I-KJ / ㎡ 26-40 JG / T 418
Amandla e-Flexural MPA .100 JG / T 418
Iimodyuli ezilula MPA Ngaphezulu JG / T 418
Vicat ukuthamba ℃ 168 JG / T 418
Idangatye elidangayo ≥E JG / T 418
Ukuxinana kg / ㎡ 15 ----
Egqithileyo Inkqubo yeNtsimbi
Okulandelayo: Elungiselelweyo Steel Formwork
Iinkqubo zokuVala eziPhathekayo
IFomwork Bracing yeKhonkrithi
Iplastikhi yoDonga lwePlastikhi yoDonga
Ifomathi yePvd yekhonkrithi